Muhiimadda Tareennada Turkiga | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMuhiimadda Tareennada Turkiga
11 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Khariidadaha, Headline, TURKEY
Muhiimadda Tareennada for Turkey, Waa qodobka ugu horreeya uguna muhiimsan ee habka gaadiidka dadweynaha, kaas oo leh ahmiyad sii kordheysa marka loo eego hababka gaadiidka. Waa astaamaha is-dhexgalka iyo horumarka dhaqaalaha. Waxay si weyn uga qaybqaataa horumarka dhaqaalaha, bulshada iyo dhaqanka ee meelaha ay ka gudubto. Waa mid dhaqaale, oo siinaya gaadiid guud ahaan la awoodi karo oo culeyska culus iyo kan culus. Waxay u ogolaaneysaa rakaab badan in lagu qaado maraakiibta hal mar isla markaana qiimo jaban. Adduunyada maanta, halkaasoo raadinta tamarta kale ay muhiimad gaar ah leedahay, waxay safka hore ugu jirtaa aqoonsigeeda deegaanka u fiican.
Waxay u tahay beddelka taraafikada waddada oo ku faafa shabakadaha Tareenka Sare. Wadada birta, oo isku xirta Yurub iyo Aasiya habka ugu soo jiidashada badan, waxay kordhineysaa awooddeena gaadiidka ganacsiga maadaama ay dhex mari doonto wadankeenna iyadoo uga mahadcelineysa meesha juquraafi ahaan uu ku sugan yahay. Waxay wadada u xaareysaa horumarinta waaxda saadka. Waxay kordhineysaa xawaaraha, awooda iyo awooda wax soo saarka warshadaha iyadoo loo fududeynayo marin u helka xarumaha saadka.
19, mid ka mid ah abuuristii saameyn weyn ku yeelatay taariikhda taariikhda. Tareenka iyo tareenka, oo ganacsi ahaan noqday qeybtii koowaad ee qarnigii hore; waxay beddelaysaa oo wax ka beddelaysaa warshadaha, ganacsiga, iyo dhaqanka; farshaxanka, suugaanta, marka la soo koobo, waxay ahayd aag saameeya ku dhawaad ​​wax kasta iyo wax kasta oo quseeya aadanaha.
Degmooyinka ka bilaabay safarkooda tareenka birta ayaa ah hogaamiyaasha ugu horeeya isbadalka bulshada iyo is dhexgalka. Ka sokow horumarka dhaqaalaha, maalgashiga tareenka ayaa kordhinaya muhiimadiisa si loo hubiyo dhexgalka cilmiga, bulshada iyo horumarka dhaqanka. waddooyinka tareennada, waxay ku soo bandhigaysaa nolol casri ah degmo kasta oo ay ku gudubto. Saamaynta ugu badan ee wanaagsan ee ay ku yeelan karaan jidadka tareenka ee ku saabsan gudbinta adeegyada dadweynaha ayaa horseeday koboca tillaabooyin loogu talagalay in lagu hagaajiyo tayada nolosha dadka.
Horumarka tikniyoolajiyada iyo cilmiga sayniska ayaa keenay in wadamadu isu soo dhowaadaan sidii hore. Si loo dhammaystiro caalami-ahaanta iyo is-dhexgalka siyaasadeed iyo bulsheed, baahida ayaa loo qabaa in la isku xidho qaababka gaadiidka. Muhiimadda jidka tareenka ayaa sidaas si ka wanaagsan loo fahmay. Sababaha ugu waaweyn ee maalgashiga tareenka, gaar ahaan midawga Yurub iyo wadamada bariga fog, ma joogsan doonaan. Waxaa la fahamsan yahay soddonkii sano ee la soo dhaafay in muhiimadda ay ugu wacan tahay gaadiidka wadooyinka, oo ah habka ugu isticmaalka badan adduunka, macno samaynaynin kaligiis.
Wasaaraddeennu waxay u aragtay waddooyinka tareenka inay yihiin midka ugu muhiimsan ee isku xirka dhaqdhaqaaqyada horumarineed ee joogtada ah waxayna si adag uga shaqeeyeen soo nooleynta waaxdan dayacday laga bilaabo 1951 illaa dhammaadka 2003. Farqiga qoto dheer ee u dhexeeya sannadihii 18-945, halkaas oo wadarta xNUMX kilomitir tareenka loo dhisay sanadka laakiin kaliya 1951 kiiloomitir, waxaa ka buuxsamay jadwalka xNUMX ee ugu dambeeya jadwalka firfircoonaanta iyo daraasadda ugu dadaalka badan ayaa la sameeyay markii 2004-16, 1856-1923, 1923-1950km marka la barbar dhigo Waxa uu ahaa.
Wadooyinkeena tareenka ayaa sidoo kale ka faa iidaystay isbeddelada fikirka isugeyn isku dhafan oo isku dhafan ee dhammaan noocyada gaadiidka lagu gaarsiiyo siyaasada gobolka mudnaanta koowaad. Muhiimadda la siinayo wadada tareenka ayaa lagu muujiyey qorshaha maalgashiga si loo gaaro yoolalka la go'aamiyay iyo kaalmada maal gashigu si aad ah ayey u kordhaysay sanad ilaa sanadka. Wadada tareenka, ee gudaha qaybaha Jamhuuriyadda bartilmaameedyada 2023
100. waxay isku diyaarineysaa inay ka tagto sumadeeda nidaamka gaadiidka.
●● Hirgelinta mashruuc-xawaare sare, xawaareyn iyo mashruuc waddo-mara,
Casriyaynta Wadooyinka Jira, Gawaarida Gawaarida, Saldhigyada iyo Saldhigyada,
Iskuxirka shabakadda tareenka iyo xarumaha wax soo saarka iyo dekedaha,
Industry horumarinta warshadaha tareenka horumarsan oo lala leeyahay waaxda khaaska ah,
●● Dalkayaga ka dhigaya saldhig muhiim u ah saadka ee gobolka, gaar ahaan xarumaha loojistikada la filayo inay ku bixiyaan fursado weyn xagga dhoofinta,
Waddo Casri ah oo Casri ah, oo ka fidi doonta Far Aasiya ilaa Galbeedka Yurub, waxaana la sameeyay khad tareen oo isdaba joog ah oo u dhexeeya labada qaaradood,
Iyada oo ay weheliso warshadaha cusub ee tareenka ee waaxda, mashaariic badan oo waaweyn ayaa si guul leh loogu hirgaliyay iyada oo la raacayo ujeeddooyinka ugu waaweyn ee horumarinta wershadaha tareenka ee gudaha, qaar badanna si firfircoon ayay uga shaqaynayeen.
rail-xawaaraha sare ee Turkey ayaa mashaariic riyo 40-sano lagu gaadhay. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya iyo Konya-Eskişehir-İstanbul Khadadka Xawaaraha Xawaaraha Sare ayaa la dhammeystiray oo la hirgaliyay. 8 adduunka oo leh khadka tareenka xawaare sare leh, 6 Yurub. anigoo goor wanaagsan in booska uu ka dal ayaa haatan bilowday marxalad cusub ee Turkey. Khadadka Xawaare Xawaare Sare ee Ankara-Sivas waa dhamaadka 2019; Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak qeybta Ankara-İzmir ee Xawaaraha Xawaare Sare, oo hadda ku socota shaqo culus, waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo 2020, Uşak-Manisa-İzmir qeybta 2021 iyo Ankara-Bursa line ee 2020.
Wadada loo yaqaan 'Baku-Tbilisi-Kars Railway' iyo Wadada Wadada Marmaray / Bosphorus, Wadada Casriga ah ee Silk Road ayaa la hirgaliyay waxaana laamiyada fog ee Aasiya-Galbeedka Yurub ay shaqeynayaan.
Marmaray 2013, oo lagu dhisay farsamooyinka tunnel-ka ee qoto dheer ee laga qodayo adduunka, ayaa waxaa laga dhisay Bosphorus, kaas oo ah riyadeena qarniga iyo badhka, taas oo loo tixgeliyo inay tahay yaabka injineernimada adduunka oo ah halka labada weji ee lagu sameeyo iyadoo la tixgelinayo dariiqyada hijrada kalluunka.
Marka lagu daro dhismayaasha cusub ee tareenka, muhiimad ayaa la siiyay casriyeynta nidaamka jira iyo olole dib u cusbooneysiin waddo ah ayaa la bilaabay. Dayactirka iyo cusboonaysiinta dhammeystiran ee 10.789 km ee shabakadda tareenka ee jira, oo intooda badan aan wax saameyn ah ku yeelan tan iyo maalintii la dhisay, ayaa la fuliyay. Markaan, kordhinta xawaaraha tareenka, awoodda xargaha iyo awoodda, rakaabka iyo gaadiidka xamuulka ah waxay noqdeen kuwa raaxo badan, badbaado leh oo dhaqso leh saamiga tareenka ee safarkuna wuu kordhay.
Mudnaanta waxaa lasiiyay iskuxirka xarumaha wax soo saarka, soonaha habeysan ee abaabulan wadooyinka tareenka iyo horumarinta isku dhafka gaadiidka. Iyada oo la qorsheynayo xarumaha loojistikada ee loo yaqaan 'OIZ', warshadaha iyo dekedaha ay kujiraan qiimaha sahaminta ugu muhiimsan ee dalkeenna iyo abuuritaanka qaar ka mid ah Fikrad gaadiid cusub ayaa la soo saaray marka loo eego gaadiidka qaranka, gobolka iyo kan caalamiga ah.
65. Barnaamijka Dowlada iyo 10. Waxaa socda dadaalo lagu hirgalinayo isbadalka Tan ee ka socda Gaadiidka ilaa Barnaamijka Saadka oo lagu soo daro Qorshaha hormarinta. Barnaamijku wuxuu ujeedadiisu tahay inuu kordhiyo ku biirinta qaybta saadka ee awoodda kobcinta dalkeenna iyo inuu waddankeenna ka dhigo mid ka mid ah dalalka ugu horreeya ee 15 ee Tilmaanta Hawlgalka Saadka.
Sharciga la habeeyay waaxda tareenka ayaa la dhaqan geliyey, kaabayaasha sharci ee xorriyadda ayaa la siiyay waaxda waxaana la furay dariiqa ay shirkadaha gaarka loo leeyahay u fuliyaan gaadiidka tareenka. Macnaha guud, habka kala goynta ee wadooyinka tareenka maaddaama kaabayaasha iyo howlgalka tareenka la soo gabagabeeyey.
Intii u dhaxeysay sanadihii 2023-2035 qeybta tareenka
Order Si loo taageero dariiqa dhexe ee Trans-Aasiya ee waddankeenna, 1.213 km laga bilaabo 12.915 km illaa 11.497 km, 11.497 km laga bilaabo 12.293 km illaa 2023 km gaarista guud ahaan dhererka tareenka ee 25.208 km ee XNUMX, sidaas darteed kor u qaadista
●● Dhamaystirka cusboonaysiinta dariiqa oo dhan,
●● qaybta gaadiidka tareenka; Kordhinta% 10 rakaabka iyo% 15 oo rar ah,
●● Hubinta in howlaha gaadiidka ee qaybta tareenada laga xoreeyay lagu qabto jawi tartan iyo cadaalad ah oo waara,
●● Kordhinta shabakadeena tareenka illaa 6.000 km adoo dhisaya 31.000 km dheeri ah xawaare sare oo xawaare sare,
Horumarinta kaabayaasha gaadiidka ee caqliga leh iyo nidaamyada si loo hubiyo is-dhexgalka shabakadda tareenka iyo nidaamyada kale ee gaadiidka,
Dhammaystirka khadadka tareenka iyo iskuxiridda dariiqyada iyo Isgoysyada Gacanka iyo noqoshada marin muhiim ah oo tareenka u dhexeeya qaaradaha Aasiya iyo Yurub-Afrika,
Waxaa loogu talagalay in lagu gaadho 20% safarka xamuulka tareenka iyo 15% ee rakaabka.
10. Ujeeddooyinka qaybta tareenka ee Qorshaha Horumarinta waa sida soo socota:
Marka la qorsheynayo gaadiidka, waxaa muhiim ah in la qaato dariiqa wadada. Codsiyada isku dhafka ee isku dhafka ayaa lagu horumarin doonaa gaadiidka xamuulka. Shabakad xawaare sare leh, xarunta Ankara;
●● Wadada isku xirta magaalooyinka Istanbul-Eskişehir-Antalya
Waxaa la sameeyay.
Jiritaanka dariiqyada hal-tareenka ah ee mudnaanta leh iyada oo lagu saleynayo baaxadda taraafikada
laba laabi doonaa.
Maalgashiga saxiixa iyo maalgashiga ee shabakadu u baahantahay waa la dadajin doonaa. U hoggaansanaanta qawaaniinta isku-xirnaanta farsamada iyo maamulka ayaa la hubin doonaa si loo hubiyo in gaadiid aan kala go 'lahayn oo is-waafaqaya la raaco Yurub.
Tareenka iyo isku xirka wadooyinka dekedaha waa la dhameystiri doonaa. Xarunta saadka ee 12 (xarunta saadka ee 9 ayaa u furan adeeg), oo hadda ku guda jira dhismaha iyo diyaarinta mashruuca, waa la dhameystiri doonaa.
In Turkey, qorshaha markii ugu horeysay logistics ah odayga loo diyaarinayo. Sharci guud ee saadka ayaa la diyaarin doonaa lana dhaqan gelin doonaa. Dadaallada lagu gaarayo ujeeddooyinka Qorshaha Horumarinta ayaa ku socda xawaare buuxa
Der Spiegel: "From Turkey si Germany for Tareennada ...
Suuriya, Turkey iyo tareennada xadka Ciraaq on ...
DP World Half of tareenka ee Turkey ...
Xilliga Kumbiyu La Xiriira Gaadiidka
Waqtiga Wareejinta Bursaray ee Mashruuca Kent Square…
Waqtiga Maktabadaha Waara ee Şanlıurfa
Aytemiz 'Mushaharka Bixinta'
"Muddadii ITAKSİ Caad
Xuduudaha Tareenka ee caadiga ah
Wadada Xariir ee Casriga ah
xawaaraha sare ee tareenka